Creative Writing » ဇီးသီးသည် ကေဇီ Vs Survivor KZ	43
ညင်းညင်း ထားတော့ အဲဒါတွေ။ အဲလို သတိကြီးကြီး ဝီရီယ ကြီးကြီး ထားတတ်တဲ့ အကျင့် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတုန်းတောင် မသိတာ ဒီရောက်တဲ့ ၈ နှစ် အချိန်ကာလပေါ့။
မြန်မာတွေကို အရမ်းဇိမ်နဲ့ထားတဲ့ အစိုးရနဲ့ နေရရင် မတော်တော့မှာ စိုးရတယ်။။
တောင်ပေါ်သား says: ( ရထား ဆိုတာ တော့ မန်းလေး မြစ်ကြီးနား ရထားကို လမ်းခုလပ် ဘူတာက တက်နိုင်တဲ့ မိသားစု။ ဘယ်လောက် တော်တုန်း ဆိုတာ အဲ ဒီ ရထား စီးဖူးရင် သိလိမ့်မယ်။ )
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်က ကန့်ဘလူမှာ ၅ နှစ် နေဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားး
တောင်ပေါ်သား says: ဘဘကြီးနယ်မြေပဲ ၊ အဲ့ဘက်တွေက ရိုးသား အေးချမ်းတယ်ဗျ ၊
ကန့်ဘလူ ကောလင်း ဝန်းသို အင်းတော် နဘား ပြောရင်းဆိုရင်း သွားချင်လာပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
အောင် မိုးသူ says: ဘ၀မမေ့နဲ့ ကွဲ့ ငှဲငှဲငှဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘဝ မမေ့ဘူးးး
kai says: ကျုပ်ကတော့ ရုပ်ရှင်အကြည့်များလို့လားမသိ…
ဖွတ် အစိုးရသာ မဲဆက်ပေးကြစို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ထိမိရင် ဓာတ်လိုက်သလိုဖစ်ပြီး မေ့သွားတာလားးး
စလုံးရောက်ပြီးနောက် ခရီး ခဏ ခဏ မသွားဖြစ်တော့တာလည်း ပါတယ်ဗျ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: http://www.amazon.com/VIPERTEK-VTS-193-Rechargeable-Tactical-Flashlight/dp/B00HPQIXGU/ref=pd_sim_sbs_200_5?ie=UTF8&refRID=0Q1FV996S6GC6QQ47F69
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးကျေး တဂျီး
kai says: အခုဟာမှာ 350-lumen tactical light ဆိုပြီးတွဲပါတယ်လေ။ ထိုးကြည့်တာတော်တော်လင်းပါတယ်။
HMM says: စဉ်းစားမိတာလေး အဲဒီ teaser ကို လူတွေအများဂျီးကူးနေတဲ့ ရေကူးကန်ထဲကရေကို သွားတို့ရင် ဘိုများနေမလဲလို့ XP
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲလောက် သတ္တိရှိတဲ့သူနဲ့ ဆို အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပြီ။
Was this answer helpful?LikeDislike 462
ကူမားရ် says: မထင်နဲ့ဟ
ဇီဇီခင်ဇော် says: မြန်ပြည်ကြီး ပြန်မယ် ဆိုရင်တော့
HMM says: အထက်ပါ comment အတိုင်း ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးသာ လက်ကိုင်ထားပြီးပြန်ပါလေ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ် ၂ ခု ညာ ၂ ခု ကိုင်ပြီး ပြန်နေရမယ်.။
တောင်ပေါ်သား says: ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၈ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေထံကို အကြောင်းကြား လိုက်ပါတယ်။
Ma Ma says: ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ စာဖတ်နေတဲ့သူက တခြားနိုင်ငံမှာ မီးခဏလေး ပျက်သွားတာ ဒုက္ခအများကြီး ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး ရီနေတဲ့ ကာတွန်းပုံလေးကို သတိရမိသွားတယ်။
လူဆိုတာကလည်း ငါးဖယ်လို ထုလေ မာလေ သဘောရှိတယ်ထင်ပါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
Shwe Ei says: -သာသာယာယာနေရရင် ဒွတ်ခ မသိတော့မှာစိုးလို့ ဟလား
-လွတ်လပ်ပေါ့ပါးခြင်းနဲ့ အတူ မိမိကိုယ်ကို အားကိုး ယုံကြည်မှု တွေ တိုးလာပါလိမ့်မည် -တစ်ယောက်ထဲတော့ မသွားနဲ့ ပျင်းစာရီး အဖော်လေးနဲ့သွား…ခိခိ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒုက္ခ မသိတော့ မှာ စိုးတာမဟုတ်ဘူးးး
Shwe Ei says: -အော် မမဆွိရယ်..တကယ် ပျောချင်တာ ဒွတ်ခအကြောင်း မှုတ်ပါဝူး
..အာ့ကျောင့် ခရီးထွက်တာလဲ မဆိုးဝူးလို့ပျော့စ်တာဘာ :P
..တရားထိုင်ပါလို့လဲ အကြံမပေးရဲဝူးလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခရီးဆို မန်းလေးးပြန်တာက လွဲရင် ဘယ်မှမသွားးချင်
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိတ်က ဒုက္ခ လို့ လက်ခံနိုင်တာနဲ့ တပြိုက်နက်
မြစပဲရိုး says: ဇီးသီးသည် ဇီးသီးဘန်းတော့ မမှောက် ခဲ့ဘူး မဟုတ်လား။ :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဇီးသီးဗန်းမမှောက်ဘူးးး
Mike says: .အမှန်တွေပဲ…တနေကုန်နေလို့ မီးတစ်ခါမှ မပျက်ရင်ကို ဟာတာတာနဲ့ .လက်တကမ်းမှာမီးခြစ်ရှိတယ်…LED မီးစလောင်းရှိတယ်…
.ကားမပိတ်ပဲ လမ်းကြောရှင်းနေရင်..တိုင်းပြည်များပျက်ပလားထင်မိတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီဟာတော့ ဒီမှာလည်း ပိတ်ပါတယ် မိုက်မိုက်ရယ်။
@QUIL@ says: ဩကာသ ဘုရားရှိခိုးထဲက….
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၂၀၀၇ တုန်း က ရပ် ပစ် ခံ ရတဲ့ အပါးတွေကတော့ မရေမတွက်နိုင်ပါဘူး။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်တယ် မမဂျီးရဲ့..
ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကိုယ်နေတဲ့နေရာက မီးပျက်ခဲတယ်… (အခုနောက်ပိုင်းပေါ့လေ..) ဒီမှာက ဘယ်အရာကိုမဆို လျှပ်စစ်မီးနဲ့သုံးလိုက်.. ခဏလေးရယ်… ဟိုရက်က နယ်ပြန်တော့ နယ်မှာ မီးပြတ်တယ်လေ… မနေတတ်ဘူး.. ဖုန်းအားက ကုန်ပြီ.. မီးက တစ်နေ့လုံးမလာ… စိတ်တိုလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့.. ထမင်းဟင်းချက်မယ်ဆိုတော့လည်း ထင်းမီးဖိုနဲ့ မတည်ချင်… မမဂျီးပြောသလို အကျင့်ပျက်သွားတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့လေ… ငယ်ငယ်က မီးသွေးမီးဖိုနဲ့ တည်ခဲ့တာ.. ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ ဆယ်တန်းအထိ စာကျက်ခဲ့တာတွေက ကိုယ်မဟုတ်ခဲ့သလိုပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: လူပျင်းမဂျီး ဖြစ်နေပြီ။
​ဒေါ် လေး says: ဟမ်မလေး ဇီဇီရေ အကျင့်ပျက်ပုံ များ
ဇီဇီခင်ဇော် says: တော်တဲ့ အစိုးးရ ရရင်
Alinsett @ Maung Thura says: သားရဲ့မမဂျီးက လမ်း မိနစ် ၂၀ လောက်ကို မလျှောက်စဖူး လျှောက်တယ်ဆိုလို့.
ဇီဇီခင်ဇော် says: မဲ ပေးးခွင့် ရ တုန်းး အရင် မဲ ပေးး ကြမယ် ဆက်ဆက်ရေ
Alinsett @ Maung Thura says: စိမ်းထားတဲ့အတွက် ဇူးဇူး မမဂျီး
Wow says: အဟင်း… အဟွတ်.. ကိုယ်နောက်ကျသွားဒယ် ချစ်.. ဓာတ်မီးရှာနေရလို့ဘာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: မသိပါဘူးးး
ဦးကြောင်ကြီး says: အဲလောက်နုသွားရင် အဝှာမယူနဲ့ဟဲ့…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ယူမှာဗျဲ။